» संसद्ले काम गर्न नसकेको जस्तो देखियो:Namasteeurope.com
Tuesday October 16, 2018 | |
संसद्ले काम गर्न नसकेको जस्तो देखियो
देश संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । २०७२ असोज ३ गते जारी ‘नेपालको संविधान’लाई कार्यान्वयन गर्न १३८ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा भएको छ तर कानुन छैन । निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश मात्र होइन राजदूतको नाम सिफारिस भएका छन् तर अड्केर बसेको अवस्था छ । अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ त ? यसै विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलसँग शनिबार गर्नुभएको कुराकानी
० नेपालको संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
– नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधानले बोकेका उद्देश्य पूरा गर्न केही कानुन बन्नुपर्ने अवस्था छ । ती कानुन अब व्यवस्थापिका–संसद्मा धमाधम विभिन्न मन्त्रालयमार्फत प्रस्तुत हुँदैछन् । कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र रहेका केही कानुन बन्ने क्रममा छन् । अरू मन्त्रालयले बनाउने तर कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर बनाउनुपर्ने कतिपय पनि बन्ने क्रममा छन् । कतिपयको विधेयक पनि तयार भएका छन् । तयार भएका विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुने क्रम सुरु भएको छ, यो अब जारी रहन्छ । असार १ गतेबाट संविधान कार्यान्वयनसँग गाँसिएका विधेयक क्रमशः संसद्मा प्रस्तुत हुन्छन् ।
० स्थानीय निकायको निर्वाचन मङ्सिरमा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ तर कानुनी तयारी चाहिँ के हुँदैछ ?
– त्यससँग सम्बन्धित एउटा विधेयक संसद्को विकास समितिमा विचाराधीन छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन बन्छ, त्यसले निर्वाचन गर्न समस्या हुँदैन । त्यसैसँग जोडिएको अर्को कार्यविधि छ, त्यो मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमा छ, त्यो पनि छिट्टै संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ । कानुन नभएका कारणले मङ्सिरको चुनाव रोकिँदैन । त्यसका लागि दलबीचमा राजनीतिक सहमतिको प्रयास पनि गरिन्छ । संविधान बमोजिमको दायित्व पूरा गर्न सबै दल अगाडि बढ्नुपर्छ र राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ ।
० अबको तीन महिनाभित्र उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, त्यसको तयारी के हुँदैछ ?
– न्याय प्रशासन ऐनमा संशोधन गरी ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो । कानुन मन्त्रालयले यसको तयारी पूरा गरेको छ र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि यसलाई पारित गरिसकिएको अवस्था छ । संसद्मा दर्ता गर्न मैले दस्तखत पनि गरिसकेको छु । अब आउने संसद्को बैठकमा यसलाई टेबल गरिनेछ । यस विषयमा सांसदलाई अपिल पनि गरिनेछ ।
० नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्थाको तयारी के हुँदैछ ?
– नागरिकका मौलिक हकको विषयमा संविधानमा पनि तीन वर्षभित्र गर्ने भनेर लेखिएको छ तर तीन वर्ष नै कुर्नुपर्छ भनेको होइन । हामीले यसलाई प्राथमिकताको चरणमा राखेका छौँ । केही विषयमा गहन अध्ययन हुनुपर्ने खाँचो छ । कतिपय विषयमा त अनुसन्धान नै गराउनुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणका निम्ति प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक हुनेछ भनिएको छ, त्यो हक हामीले कसरी दिन्छौँ ? कसकसलाई कसरी प्राप्त हुन्छ ? त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी हकका विषयमा पनि हामीले गहन छलफल गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । संविधानमा नागरिक हक र मौलिक हकसँग गाँसिएका कानुनका विषयलाई तीन वर्षसम्म लगाएर जाने अवस्थामा हामी छैनौँ ।
० न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा सर्र्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादन प्रभावित छ, त्यसका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्यायका निम्ति याचना गरिरहेका सेवाग्राही प्रभावित छन्, यो विषय सरकारलाई राम्ररी थाहा छ । सर्र्वोच्च अदालतमा २१ न्यायाधीशको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । पहिला १५ सदस्यीय थियो, मुद्दाको चाप हेरेर नै त्यसलाई २१ सदस्यीय बनाइएको हो । न्याय परिषद्ले केही न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ । त्यो सिफारिस संसद्मा गएको छ । दुर्भाग्यवश संसद्ले आफ्नो नियमावली बनाउन सकेको छैन । यस विषयले शनिबार सभामुखको कार्यकक्षमा पनि प्रवेश पाएको थियो । असार १ गतेको बैठकमा नियमावली अगाडि बढाउने जानकारी सभामुखले दिनुभएको छ । त्यो नियमावलीमा छलफल भई पारित भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएपछि सबै नियुक्तिका प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछन् ।
० त्यसो भए अब चाहिँ संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुने भयो होइन ?
– असार १ गते नियमावलीले संसद्मा प्रवेश पाउनेछ । नियमावली नबन्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस भइसकेको छ, अन्य न्यायाधीश, राजदूतको नाम सिफारिस भएको पनि लामो समय भइसकेको छ । संसद्ले नियमावली प्राप्त गरेपछि सिफारिस भएका नाममा टुङ्गो लाग्नेछ ।
० न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस नगर्दा चार महिनादेखि संवैधानिक इजलास अवरुद्ध छ नि ?
– न्यायाधीश र राजदूतका बारेमा पनि संसद्को नियमावली पारित नभएकाले रोकिएको अवस्था छ । यसरी रोकिनु औचित्यपूर्ण पनि देखिएन । व्यवस्थापिका–संसद्ले काम गर्न नसकेको जस्तो देखियो । त्यसो भएकाले संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलले यो संविधान जारी गर्दाको बखतमा नै संसदीय सुनुवाइ गरेर जाने कुरा राखियो, अब संविधानमा लेखिएको कुरा पूरा गरेर जानुप¥यो । संविधानको मर्म अनुसार त हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । नियमावली बनाउने कुरामै आलटाल गर्ने कुरा उचित हुँदैन । सरकार यो नियमावली हिजो पनि पारित गर्न तयार थियो, सहमतिका लागि आवश्यकताभन्दा लामो समय हामीले खर्च गरिसकेका छौँ । हामी अब असार १ गतेपछि पनि सहमतिका नाउमा पर्खनसक्ने अवस्थामा छैनौँ । सहमति गर्ने समितिमा हो तर अब पनि हामी सहमतिका लागि प्रयास गर्छौं र सहमति भएन प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन । सहमतिको नाममा अल्झाएर संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति रोक्ने पक्षमा सरकार छैन ।
० संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत दल मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न के कस्ता प्रयास हुँदैछन् त ?
– मधेस केन्द्रित दलका मागलाई केन्द्रित गरेर नै हामीले पटकपटक वार्ता र छलफल गरेका छौँ । वार्ता र संवादका टेबलमा हामी पटकपटक बसेका छौँ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि धेरैपटक पहल गर्नुभएको छ । संवाद हुन सकिरहेको अवस्था छैन । उहाँहरू संवादको टेबलमा आउनुपर्छ । वार्ता र संवादको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार अझै तयार छ ।
० संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको गति सुस्त भयो भनिन्छ नि ?
– यो बजेट अधिवेशन भएकाले यसैमा बढी समय त लाग्छ नै तर हामीले अबको संसद्को बैठकमा बजेटमा छलफल पनि जारी रहन्छ र अब दिनको एक/दुई घण्टा संविधानले परिकल्पना गरेका कानुनको निर्माणका निम्ति समय दिन्छौँ । संसद्मा अब लगातार बन्नुपर्ने कानुनका विधेयक टेबुल हुनेछन् । त्यसमा हामी सत्ता पक्ष र विपक्षमा को छौँ भनेर नभनी संविधानले आवश्यक ठानेका कानुन निर्माण गर्न हामी सबै सांसद सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनेछौँ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको मात्र होइन सबै राजनीतिक दल र सांसदको पनि हो । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो मर्म अझ बढी बुझेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।